NGP+ , premium N2 generator with PSA - Atlas Copco Thailand
NGP+ ပရီမီယံ N2 ထုပ်လုပ်သောစက် PSAပုံစံ
သင့်ကိုယ်ပိုင် N2 ကိုထုတ်လုပ်ပါ
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ NGP+ သည်အလိုအလျောက်ပိတ်သော စစ်ဆေးမှု လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိသည်။ ထိန်းချုပ်မှုတွင်ထည့်သွင်းထားသော သန့်စင်သောနိုက်ထရိုဂျင်သည် သင်၏အထိခိုက်မခံသော အသုံးပြုမှုသို့ ဘယ်တော့မျှရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ထည့်သွင်းထားသောလေထုအခြေအနေများကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ထုက်လုပ်‌သောစက် ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါက ထည့်သွင်းသောလေသည် စက်ထဲသို့မ၀င်မီ အပြင်သို့ ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို အချိန်ကြာမြင့်စွာခံစေပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်း 4.0 အတွက်အဆင်သင့်ပါပဲ
SMARTLINK ပေါင်းစည်းမှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် စွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်း အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ရန် ရိုးရှင်းပြီး ထိရောက်သော နည်းလမ်းကိုပေးပါသည်။
လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို 50% လျှော့ချ
NGP+ နိုက်ထရိုဂျင်စက်သည် အခြားနိုက်ထရိုဂျင်စက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ်၏ 50% အထိ လျှော့ချပေးသည်။ လေအား 1.8 (95%) မှ 5.5 (99.999%) အထိ အဆင့်မြင့် N2 ကိုထုတ်လုပ်သည်
ခြောက်သွေ့သော လေအားများချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အခါ NGP+ ကိုအဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
99,999% အထိ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း
သင်၏အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် NGP+ သည် နိုက်ထရိုဂျင်၏သန့်စင်မှုကို 95 မှ 99.999% ရာခိုင်နှုန်း အထိပေးသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် N2 ထောက်ပံ့မှုကိုအားကိုးခြင်း
NGP+ စနစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိနိုင်သည်။ N2 ထောက်ပံ့မှု မလုံလောက်ခြင်းကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ
သင်၏အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် NGP+ သည် 95 မှ 99.999% ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း ရှိသည့် နိုက်ထရိုဂျင် သန့်စင်မှု အားပေးပါသည်
2870 Nm3/h အထိစီးဆင်း
ပရီမီယံ N2 ၏ မျိုးဆက် သစ်များ
သင်ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှတော့ ဘာ့ကြောင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကို ၀ယ်နေတော့မှာလဲ? NGP+ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးဆက် အဆင့်မြင့် N2 စက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ခေတ်သစ်နိုက်ထရိုဂျင် စက်၏ အလုပ်လုပ်ခြင်းနိယာမသည် ဖိအားဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းပညာကို အခြေခံသည်။ NGP+ သည် အပြည့်စုံဆုံး ထောက်ပံ့ရေးနယ်ပယ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ PSA နိုက်ထရိုဂျင် စက်များ၏ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင် ထိရောက်မှုကို ပေးသည်။ ၎င်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည်မှာ - အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော CMS - ကျယ်ပြန့်သော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု လက္ခဏာများ - ဖိအားနှင့် သန့်စင်မှုကို ထိန်းညှိရန် ရွေးချယ်စရာများ
On-site industrial gases. Nitrogen & Oxygen Generator
Nitrogen and Oxygen Catalog 5.8 MB
Nitrogen generators Nitrogen and oxygen generation systems Nitrogen generation systems Air and gas treatment Gas generation